hoy ny lefitry ny ben’ny tananan’Antananarivo, Mamy Rajhonson, nampahatsiahy. Toby miisa 2 dia teny Anosizato, izay toerana an’ny CUA, no voalohany ary ny faharoa dia nangatahana ny minisitera ka ny eny Nanisana no nametrahana azy ireo. 1000 isa mahery ireo tsy manan-kialofana ireo ary karakarain’ny CUA nanomboka teo ka hatramin’izao na lafiny sakafo io na fonenana na fidiovana sy ny rehetra. Efa jerena ihany koa izay fomba tsy hiverenan’izy ireo amoron-dalana intsony, hoy izy. Antony nanaovana antsoavo ny malala-tanana izany. Nomarihiny fa ny fiadidiana ny repoblika kosa no tompo-marika amin’ireo fanampiana hafa toy ny Vatsy Tsinjo sy ireo nomena ny mpitatitra. Nisy fahasahiranana teo amin’ny fitsinjarana ny Vatsy Tsinjo ary antony io niaingana taty aoriana tamin’ny antontan’isa eo anivon’ny PAM na drafitra misahana ny sakafo maneran-tany. Nambaran’ity tompon'andraikitra ity ihany koa fa hatreto aloha dia mbola tsy tafapetraka eto Antananarivo renivohitra ilay rafitra atao hoe Loharano. Rafitra natao haharitra fa tsy handalo ao anatin’izao ahamehana izao fotsiny izy io ka mbola eo am-pandaminana izay ny fiadiadiana ny repoblika satria avy any no miainga ny fananganana azy. Ny kaominina sy solombavambahoaka ary ny eny anivon’ny distrika kosa no indray miara-misalahy hanangana ilay komity Loharano, hoy hatrany ny fanazavany.